Iziseko ezine zeengqiqo eBuddhism
Imiyalelo kaBuddha yeCandelo loMqondo
Ingqiqo yenye yezona ndlela ezisisiseko zobuBuddha. Inxalenye yeNdlela yesibhozo kwaye yenye yezinto eziMkhomba zoKhanya . Kwaye ngoku ihamba ngokuthe tye. Abantu abaninzi abanomdla okhethekileyo kulo lonke ubuBuddha baye bathatha ingcamango engqondweni, kwaye ezinye izazi zengqondo ziye zathatha isicatshulwa njengengqondo yokunyanga .
Nangona ihambelana nokucamngca, uBuddha wafundisa abalandeli bakhe ukuba baqikelele ingqondo yonke ixesha.
Ingqiqo inokusinceda siqonde ubungqina bezinto eziqhetseba kunye nokuphula izibophelelo zokuzibamba.
Ingqiqo kwingqondo yeBuddhist ingaphelelanga nje nje ukuthobela ingqalelo kwizinto. Ukuqonda okumsulwa ngaphandle kwemigwebo kunye neengcinga kunye nokuzimela. Ukuqonda kwangempela kuthatha uqeqesho, kwaye uBuddha ucebisa ukuba asebenze ngeziseko ezine zokuziqeqesha ukuba uqikelele.
Ezi ziseko ezine zinezikhokelo zesithenjwa, ngokuqhelekileyo zithathwa enye ngexesha. Ngale ndlela, umfundi uqala ngokuchukumisa kwengqondo kwaye uqhubela phambili ukukhumbula ingqalelo yonke into. Ezi ziseko ezine zisoloko zifundiswa kumxholo wokucamngca, kodwa ukuba ukuqhuba kwakho kwansuku zonke kuhlabelela, oku kungasebenza.
Isiseko sokuqala siwukhumbule umzimba. Oku kukwazisa ngomzimba njengomzimba-into ebonakalayo njengokuphefumla nenyama kunye namathambo. Akunjalo "umzimba" wam. Akuyona ifomu ohlala kuyo.
Kukhona umzimba nje.
Uninzi lwentsebenzo lokuqala lwengqondo lujolise ekuphefumlweni. Oku kuphefumlelwe kwaye kukuphefumula. Akucingi ngokuphefumula okanye ukuza neengcamango ngokuphefumula.
Njengoko ukukwazi ukugcina ulwazi kuqina, ugqirha uyazi ukuba wonke umzimba.
Kwezinye izikolo zesiBuddha, lo msebenzi ungabandakanya ukuqonda ngokuguga nokufa.
Ukuqwashisa umzimba kuya kuthathwa. Ukumema kunye nemikhuba yimizimba yokukhumbula umzimba njengoko ihamba, kwaye ngale ndlela siqeqesha ukuba sikhumbule xa singacamngca, kwakhona. Kwezinye iinqununu zamaBuddhism namademoni baye baqhuba ubugcisa be-kartial njengendlela yokugxila ekugxininisweni, kodwa imisebenzi eminingi yemihla ngemihla ingasetyenziselwa "njengomzimba."
Isiseko sesibini sikhumbula ingqondo, zombini imizwa kunye neemvakalelo. Ekucamngeni, umntu ufunda nje ukugcina iimvakalelo kunye neengqondo ziza kwaye zihambe, ngaphandle kwemigwebo kwaye zingabonakali nazo. Ngamanye amazwi, akusiyo "imizwa" yam, kwaye iimvakalelo azichazi ukuba ungubani. Kukhona iimvakalelo nje.
Ngamanye amaxesha oku kunokuba nzima. Yintoni enokuza kusenokumangalisa ngayo. Abantu banomsebenzi omangalisayo wokungazinyameki zethu uxhalaba kunye nentlungu kunye nentlungu, ngamanye amaxesha. Kodwa ukungahoyiyo iimvakalelo esiyithandayo akubiyo. Njengoko sifunda ukugcina nokuqonda ngokupheleleyo iimvakalelo zethu, sibona nendlela iimvakalelo ezidlulayo ngayo.
Isiseko sesithathu sikhumbula ingqondo okanye ukuqonda.
"Ingqondo" kule siseko kuthiwa yi-citta. Lo mqondo ohlukileyo ukusuka kumntu ocinga iingcinga okanye enze izigwebo. I-Citta ifana nokuqonda okanye ukuqonda.
I-Citta ngezinye iinguqulelo iguqulelwe ngokuthi "ingqondo-ntliziyo," kuba inekhwalithi yovakalelo. Kuyinto ingqalelo okanye ukuqonda okungenakwakhiwa kweengcamango. Nangona kunjalo, akunjalo ukuqonda okucacileyo ukuba yi-fifth skandha .
Enye indlela yokucinga kwesi siseko "ukuqonda kwengqondo." Njengemvakalelo okanye iimvakalelo, iingqondo zethu ziza kwaye zihambe. Maxa wambi silala; ngamanye amaxesha asihlali. Sifunda ukugcina ingqondo yethu ngokuthethelela, ngaphandle kwesigwebo okanye umbono. Njengoko beza behamba, siyaqonda ngokucacileyo ukuba bangabonakali njani.
Isiseko sesine sikhumbula ingqondo. Apha sizivula kwihlabathi lonke, okanye ubuncinane ihlabathi esinalo.
I-Dharma ligama lesiSanskrit elingachazwa ezininzi iindlela. Unokuyicinga nje ngokuthi "umthetho wendalo" okanye "indlela izinto." I-Dharma ingabhekisela kwiimfundiso zeBuddha. Kwaye i-dharma ingabhekisela kwiziganeko njengembonakaliso yenyaniso.
Ngamanye amaxesha isiseko sithi "ukucinga kwengqondo." Kungenxa yokuba zonke izinto ezininzi ezisijikelezayo zikhona ngathi njengezinto ezingqondweni. Ziyinto abayiyo kuba yindlela esibaqonda ngayo.
Kule siseko, siyazi ukuqonda ngokuhlala kuzo zonke izinto. Siyazi ukuba zisesigxina, zingenazo zodwa, kwaye zilungiswe yinto yonke. Oku kusishukumisela ukuba sifumane imfundiso ye- Dependent Origination , yindlela into ephakathi ngayo.
Yin Tang: "iHolo yokuBonakalisa" i-Accupressure Point
Icawa yaseManyeneyo yeenkolelo zikaKristu
INqununu yoMvelaphi oxhomekeke kwiBuddhism
Biography ka Thich Nhat Hanh
Baba Siri Chand Biography
Indlela Yokuthanda NjengoYesu
Eyona ndlela ihamba phambili yeJuno Blizzard Memes
Imisebenzi ye-Getenv () ye-PHP
Ubani Ingelosi Elalilwa NoYakobi?
Iingcaphuno ezivela kwi-'Afrewell to Arms 'nguErnest Hemingway
Indlela Yokuqalisa Ukuhambisa Iinkomfa Zakho Zokupapasha Ukupapashwa
Iingoma zeKrismesi eSpanishi ¡Cantemos!
Ngaba kufuneka uvuselele okanye ufake iNjini yeCorvette ekhulelweyo?
Izizathu Zokufudumala Kwehlabathi
Ukuguqula ii-Angstroms kwiMitha
Izikhundla eziphezulu ezi-10 zokuSebenza kwabasetyhini
10 Amanqaku Ngokuthandana Nentshukumo Yogonyamelo - Intshukumo Yokutshatyalaliswa Kokuxhatshazwa Kwezenzo
I-Aerobic neAraobic Process
Ukuhlaziywa kwemizimba ye-Harley-Davidson V-Rod Muscle
'La Ces Filles' ngesiFrentshi, akuthi 'Cettes'
Quels Emveline Pankhurst Quotes
Ukwamkela iBhajethi ye-Federal Federal